Maitiro ekuwedzera bhukumaki kuChannel kubva kuSafari pane iOS | IPhone nhau
Maitiro ekuwedzera bhukumaki kuChannel kubva kuSafari pane iOS
Chokwadi vazhinji venyu, kunyanya kana muchishandisa Mac, shandisa iyo Safari browser inosanganisirwa natively muIOS, nekuda kwekubatanidzwa kwayinopa kuburikidza neICloud. Kana iwe ukashandisa zvese zviri zviviri Safari uye Chrome zvisina kujeka, kungave kuri paPC kana Mac, zvingangoita kuti pane imwe nguva unozomanikidzwa kuchinja browser kuchengetedza bookmark.
Kana iwe uri kushanyira peji rewebhu kubva kuSafari usingazvizive, asi iwe uchida kuichengeta muChannel browser, haufanire kutevedzera nekunamatira iyo URL muChannel kuti ugone kuichengeta gare gare, kubvira chaiko kubva kuSafari, uye nekuda kweichi chidiki hunyengeri, unogona chengetedza zvinongedzo muChannel kubva kuSafari.
Google yagara ichizivikanwa nekupa huwandu hwakanyanya hwesarudzo kuvashandisi kuburikidza nemaapplication uye basa iri harigone kunge risipo. Chekutanga, isu tinofanirwa kuve ne Chrome yakaiswa pane yedu kifaaKana zvisiri, kumagumo kwechinyorwa ini ndinosiya yakanangana kuApp Store kuti ndiitore.
Matanho ekutevera kuwedzera bhukumaki kuChannel kubva kuSafari pane iOS
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuvhura iyo peji rewebhu ratiri muSafari.
Tevere, tinya pane iyo share bhatani, inomiririrwa nemuseve wekumusoro unobuda mubhokisi, wobva wadzvanya pane Zvimwe.
Ipapo isu tinofuratira iyo chrome switch, kuti iratidzwe mune sarudzo dzekugovana.
Padanho rinotevera, kana tangodzoka papeji ratiri kuda kuwedzera kuChannel, tinobaya pa Goverana bhatani uye sarudza iyo Chrome browser.
Ipapo sarudzo mbiri dzinozoratidzwa: Verenga Gare gare kana Wedzera kumabhukumaki.
Nekudzvanya pane iyi yekupedzisira sarudzo, webhusaiti yatiri inochengetwa mumabhukumaki e Chrome uye ichaenderana neakaundi yedu, chero bedzi bhurawuza iri kushandiswa neakaundi yedu yeGoogle.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekuwedzera bhukumaki kuChannel kubva kuSafari pane iOS
Apple inobvisa iyo Shazam app kugadzirisa mune nyowani yekuvandudza
Vachakwanisa kuvhura yedu iPhone X kana yakakwira iine 3D yakadhindwa musoro?